Business – Live Nepal News
पर्यटक बसमार्फत रक्तचन्दनसहित अवैध सामान ओसार पसार गर्ने दुई जना पक्राउ परेका छन् । रक्तचन्दनसहित राजस्व नै छली गरी भित्र्याइएको अवैध सामानसहित टुरिष्ट बसका चालक र सहचालक पक्राउ परेका हुन् । गत सोमवार विहान ३ बजे ना ४ ख ४५१६ नम्बरको बस नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौंका लागि छुटेको थियो । बसमा …
सिन्डिकेट कायम राख्दै एकलौटी बस चलाउन पाउनुपर्ने माग राखी सेवा अवरुद्ध गर्ने यातायात समितिका बसको रुट परमिट (बाटो इजाजतपत्र) सरकारले खारेज गर्ने भएको छ । आजको कारोबारको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ । साविकको यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारी बागमतीले मयुर यातायात प्रालिलाई काठमाडौ-बनेपाको रुट परमिट दिइ उक्त …
प्राइम बैंकको न्यूरोड साखाबाट निकालेको पैसाको बिटोमा १० रुपैयाँको नोट भेटिएको छ । हजार- हजारका नोट गरी एक लाख रुपैयाँ भनेर दिईएको बिटोमा बीचमा १० रुपैयाँको नोट भेटिएको हो । बैंकले दिने नोटहरुमा नोट अपुग हुने समाचार यसअघि पनि आएको थियो । तर यसपाली भने कम मूल्यका नोटहरु फेला परेको …
कतारस्थित नासिर अल अली इन्टरप्राइजेजले आफ्नो कम्पनीमा १० वर्षसम्म काम गरेका नेपाली कामदार नन्दबहादुर विश्वकर्मा र नरबहादुर मगरलाई जनही १५ हजार रियाल (झन्डै चार लाख ३५ हजार रुपैयाँ) दिई पुरस्कृत गरेको छ । कम्पनीका मालिक नासिर अल अलीले लामो समयसम्म सेवा पुर्‍याएकाले पुरस्कृत गरिएको बताए । कम्पनीले हरेक वर्ष आफ्ना कामदारलाई पुरस्कृत …
अब वृद्धभत्ता नपाउने ! अर्थमन्त्री खतिवडा………..
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा बाम गठबन्धनको घोषणापत्रको बिरुद्दमा उभिएका छन। जुन नाराका कारण बाम ठबन्धनले प्रष्ट बहुमत ल्याउन सफल रह्यो सांसद नबनी सिधै अर्थमन्त्री बनेका खतिवडाले एमाले माओवादीको त्यहि नीतिको बिरुद्दमा अभिव्यक्ति दिएका छन। संयुक्त घोषणा पत्र बनाएर चुनावमा गएका एमाले र माओवादीले मासिक दुई हजार रहेको वृद्धभत्तालाई बढाएर ५ …
दुबईमा ‘लिभिङ टुगेदर’, अर्कैसँग बिहेपछि ब्ल्याकमेल गर्दै बलात्कार !
काठमाडौंको ठमेलका एक व्यवसायीले ब्ल्याकमेल गरेर युवतीलाई लामो समयदेखि बलात्कार गर्दै आएको खुलेको छ । प्रहरीले २३ फागुनमा ठमेलस्थित उनकै पसलबाट पक्राउ गरेको छ । यद्यपि, उनको परिचय खुलाएको छैन । ‘घटनामा उसँगै अन्य व्यक्ति पनि संलग्न हुन सक्ने देखिएको छ । हामीले त्यसतर्फ अनुसन्धान गरिरहेका छौं’, काठमाडौं प्रहरी परिसरका …
३६ लाख ठगी मुद्दाकी फरार अभियुक्त रोमा न्यौपाने पक्राउ
एक खुट्टाको भरमा नाच देखाएर चर्चा बटुलेकी कलाकार रोमा न्यौपानेलाई प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको छ । ठगी मुद्दाको फरार अभियुक्त रहेकी न्यौपाने लामो समयदेखि प्रहरीको आँखा छलेर लुक्दै आएकी थिइन् । १२ फागुनमा प्रहरीले पक्राउ गरे पनि महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्ग र लैनचौर वृत्तले मुद्दाको गम्भीरता बुझ्दै नबुझी उनलाई त्यसै छोडिदिएको …
आजदेखि लागु हुदै नया नियम ! छोरी जन्मिए खातामा २५ हजार, २० वर्ष नपुग्दै बिहे गरन नपाइने ,बिहे गरे जेल …छोरीलाई माया गर्नेले शेयर गर्नुहोस् !
रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाले छोरी जन्मिए मुद्दती खाता खोलेर २५ हजार जम्मा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । लिंग पहिचान गरी छोरी भएमा गर्भपतन गर्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न गाउँपालिकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ । छोरीको पहिचान गरी गर्भपतन नगरून भनेर स्थानीय तहले विशेष …
एक तोला होइन दश तोला सुन किन्नु बुढी । पाँच लाखको होइन पचास लाखको घर किन्नु दाजु । बिदेशमा छु म । मैले केही खानु लाउनु पर्दैन । जति पनि पैसाको माग गरे हुन्छ मैले तलब पाउनलाई महिना मर्नु पर्दैन । किनकि बिदेशमा छु म यहा डलर मै छाप्ने गर्छु …